» साढे १५ करोड रुपैयाँमा बिक्री भयो एउटा परेवा !
१० चैत्र २०७५, आईतवार १५:३१
काठमाडौं । हाम्रो गाउँघरमा एक जोडी परेवालाई कति रुपैयाँ पर्ला ? सामान्यतया ५ सयदेखि १ हजार रुपैयाँ । तर, बेल्जियममा एउटै परेवाको मूल्य साढे १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी परेको छ । पक्कै पनि अचम्म पर्नु भयो होला ।
बीबीसीको समाचार अनुसार अर्मान्डो नामक एउटा परेवा १.२५ मिलियन यूरो (नेरु १५ करोड, ५६ लाख ३० हजार ५६२) मा लिलामी भएको छ । तर यो परेवा साधारण परेवा भने होइन । यसले उडान प्रतियोगितामा सबैभन्दा उत्कृष्ट परेवाको उपमा पाएको छ । त्यसैले यसलाई ‘परेवाहरुको लुइस हेमिल्टन’ पनि भनिन्छ । यसअघि एउटा परेवा १५ करोड ५३ लाख ६० हजार रुपैयाँ लिलामी भएको रेकर्ड थियो । तर, त्यो रेकर्ड अर्मान्डो परेवाले तोडिदियो । लिलामी हाउस पीपाका सीईओ निकोलास गाएसेलब्रेख्त भन्छन्-अर्मान्डो परेवा यति धेरै पैसामा बिक्ला भन्ने लागेकै थिएन । उनले भने, ‘हामीहरुले यसको मूल्य यति धेरै होला भन्ने सपनामा पनि सोचेका थिएनौं । हामीलाई आशा थियो कि यो चारदेखि पाँच लाख यूरोमा बिक्ला । एकदमै धेरै भए ६ लाख यूरोसम्म सोचेका थियौं ।’
गाएसेलब्रेख्तका अनुसार चीनका दुई व्यापारीले लिलाम बढाबढमा आफ्नो बोली लगाए । एक घण्टामै ५.३२ लाख यूरोदेखि १.२५ मिलियन यूरोसम्म पुग्यो । सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर उडान प्रतियोगितामा सहभागी हुने परेवाहरुको मूल्य २५ सय युरो हुन्छ । तर अर्मान्डो अरु परेवाहरु जस्तो सामान्य होइन । आफ्नो करियरको अन्तिम तीन दौड यसले जितेको छ । २०१८ को ऐस पिजन च्याम्पिनशिप, २०१९ को पिजन ओलम्पियाड र अंगुलेममा अर्मान्डो पहिलो भएको छ । उसले थुप्रै प्रशंसकहरु पाएको छ । बेल्जियमको परवेज शहरको स्थानीय पिजन फेसिङ एसोसिएशनका अध्यक्ष फ्रेड वेंकेलीले भनेका छन्, ‘यो परेवा लुईस हेमिल्टन हो र यो खेल इतिहासको सबैभन्दा उत्कृष्ट छ ।’ अर्मान्डो पाँच वर्षको भयो । हाल यसले अवकासको जीवन बिताइरहेको छ । तर उसको नयाँ मालिकले त्यसबाट प्रजनन गराएर उसको वंश उत्पादन गर्ने सोच रहेको बताएका छन् । एजेन्सी